Momba anay - Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Bike an'ny ankizy
Tongasoa eto amin'ny Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Agence famoronana matihanina izahay
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd., miorina ao Shijiazhuang, faritanin'i Hebei, dia orinasam-pandraharahana manafatra sy manondrana matihanina, manana traikefa an-taonan'ny varotra bisikileta izahay, ivon-toeram-pikarohana sy fampandrosoana eo amin'ny toby famokarana any Tianjin sy Hebei, ny vokatra lehibe misy bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta aforeto, bisikileta an-tanàna, bisikileta ankizy ary bisikileta mandanjalanja.
Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary ankafizinay indrindra amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao.
Azontsika atao ny manome ny safidin'ny rafitra famatsian-kalitao avo lenta, ny fanaraha-maso ny fizotry ny famokarana avo lenta ary ny fifehezana ny antsipirian'ny fitsapana avo lenta. Manana fotoana fandefasana haingana izahay amin'ny vidin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena.
√ Manana lamina be loatra ho an'ny safidin'ny mpividy isika, ary hamelombelona ihany koa amin'ny elanelam-potoana tsy tapaka, ny trano fitahirizam-bokinay dia manana bisikileta betsaka, isan'andro dia hamelombelona ny isa, hamonjy fotoana bebe kokoa ho an'ny mpividy ny entana, fandefasana haingana ary haingana valiny aorian'ny fivarotana varotra no mampiavaka ny orinasa anay.
√ Ny orinasanay dia mivarotra tsara miely amin'ny faritany sy tanàna 20 mahery any Chine ary aondrana any amin'ny firenena sy faritra 30 toa an'i Etazonia, Russia, France, Canada, Australia, India sns.
√ Afaka mamokatra ny vokatra miorina amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa izahay, afaka manome serivisy OEM, raisina ny endrikao sy ny sary famantarana anao. Manana ny marika beimudou izahay, mitady mpikaroka am-pahatsorana amin'ny firenena samy hafa izahay.
√ Vonona izahay hiara-hiasa am-pahatsorana amin'ireo mpivarotra sinoa sy avy any ivelany mba hamorona fiaraha-miasa rahampitso tsaratsara kokoa. Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny ary faly izahay mandray ny taratasinao.
√ Ny orinasanay mifototra amin'ny fitsipiky ny "kalitao ambony sy ny lazanay", ny mpanjifa na ny ao an-trano na ny any ivelany dia horaisinay amin-kitsimpo hiresaka momba ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa lava mba hametrahana ho avy mamiratra.
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd. miorina ao Shijiazhuang, faritanin'i Hebei, dia orinasa mpivarotra mpanafatra sy manondrana matihanina, manana traikefa an-taonan'ny asa bisikileta izahay.
Bisikileta fandanjana ankizy, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta fandanjalanjana mavokely,
Zhuye Gaoxin International 001-1308, No.9 Changjiang Avenue, Distrikan'i Gaoxin, Shijiazhuang, Hebei, Sina